Mars nnọgidesi ike: njirimara, mejupụtara na nyocha | Netwọk Mgbasa Ozi
Mars nnọgidesi ike
Mmadu adighi ada ada na ichu ndu n’elu uwa ozo na sistemu anyi na igwe. Mars bụ ụwa nke dịbu na ga-abụ ebumnobi nke ọchụchọ maka ụwa iji biri. A ga-atụkwa anya ya mgbe mmiri na oke osimiri kpuchiri ihe anyị na-akpọ ụwa na-acha ọbara ọbara. Ugbu a, anyị na-akpọ robot Mars nnọgidesi ike nke bu oru nke iweputa ihe omuma banyere mbara ala nke oma.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara nnọgidesi ike Mars na njirimara ya.
1 Nyochaa mbara ala Mars
2 Mars nnọgidesi ike
3 Igha ala nke Mars
4 Ofda nke ụwa na-acha ọbara ọbara
Nyochaa mbara ala Mars
Ihe karịrị afọ 40 nke nyocha emeela ka anyị nwee nkọwa zuru ezu banyere mmalite nke ala Martian ihe dị ka ijeri afọ 3.500 gara aga, mana ọtụtụ n'ime ihe omimi ya ka enweghị nghọta. Site na data a, anyị nwere ike ịhụ mmasị ndị mmadụ na ụwa uhie. Uzo ato nke mba ato zitere na mbara ala nke onwa a: China, United Arab Emirates na United States. Spacelọ ọrụ na-ahụ maka ohere gị ahaziri ụdị ụgbọ elu ọhụụ akpọrọ Mars perserverance. Ọ ga-ahụ maka ịchọta akara nke ndụ gara aga na ala Martian.
Emepere Rover na July 2020 wee mee ka ọ fefere elu ụwa ma ọ dịkarịa ala otu afọ Mars, nke odika dika 687 Ubochi nke uwa. Ọ nwere sistemu kọmputa nke nwere nnukwu ike ịhazi data.
N'ime ngwaọrụ niile, ngwaọrụ abụọ ga-arụ ọrụ kachasị mkpa na usoro nke ịchọ ihe ịrịba ama nke ndụ n'oge gara aga: nke a na-akpọ SHERLOC ga-ahụ maka ịchọpụta mineral na ihe ndị dị ndụ. Ọrụ PIXL bụ ịkọwapụta ihe mejupụtara kemịkal na nkume. Ngwaọrụ abụọ a ga-enyocha ọrụ ndị a yana ọkwa zuru oke karịa Mars Rover ruo taa.
Gbọ ala ahụ ga-agagharị n'elu mbara ala uhie iji chọọ ihe atụ nkume site na ndagwurugwu nwere oke nke 45 kilomita. Ndagwurugwu ahụ dị na Jezero, ebe ugwu nke ala Mars, e guzobere ya ihe dịka ijeri afọ 4 gara aga ma kwenyere na ọ nwere ọdọ mmiri. Mmesiri na nchịkọta nke ihe atụ ga-enyere aka ịchọpụta ihe omimi nke ọdịdị ala ya ma lelee ma ọ bụrụ na oyi akwa ya nwere ike ịnwe ụmụ nje. Nrụgide nke Mars na-arụkọ ọrụ yana obere helikọpta akpọrọ Ingenuity, nke ọ ga - enyere aka ịchọpụta ma ụgbọ ala ndị a nwere ike ife efe na ikuku Martian dị mma.
Otu n'ime egwu nke a robot webatara bụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke igwefoto nwere ike inweta ogo onyonyo n'elu Mars. Enwere ọtụtụ kamera karịa ka ejirila rụọ ọrụ ọ bụla ọzọ. Kpọmkwem, anyị hụrụ igwefoto 19 dị na ụgbọala n'onwe ya na 4 ọzọ na akụkụ nke usoro mgbada na ọdịda. N'ụzọ nke a, ọ na-ejisie ike were nwee ọgbakọ dị iche iche na ọdịda ma ha bụ onyonyo enwere ike hazie ịbawanye ogo ha.
Igwefoto a na-akpọ Mastcam-Z nwere ike ịbawanye na textures nkume ruo n'ọgba bọọlụ. N'aka nke ọzọ, o nwekwara igwefoto SuperCam nwere ike iji laser na-emetụta na foduru nke nkume na regoliths. Ihe ndị a bụ iberibe okwute mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi na iberibe ihe ịnweta ndị a hụrụ n’elu mbara ụwa na-acha ọbara ọbara. Ebumnuche bụ isi nke ime ụlọ ndị a bụ ịmụ ihe mejupụtara alụlụ dị na ya. Igwe ihe eji arụ ọrụ na-eji ebili mmiri iji nwee ike ịchọpụta atụmatụ ala.
Igha ala nke Mars
The Mars ịnọgidesi ike ọdịda nwere ike inwe ọtụtụ njehie. Ma ọ bụ na nkwụsị nke karịa ọnwa 6 ga-ejedebe, ọ bụ ezie na nkeji 7 ikpeazụ bụ ihe dị mkpa. Correspondinglọ ndị kwekọrọ na ngalaba ikpeazụ nke njem ahụ ma kwekọọ na ọdịda ya. Na robot wepụtara mgbasa ozi redio ka ọ banyere na mbara ikuku nke Mars. Nsogbu dị bụ ebe dị anya site na mbara ụwa na ụwa. Ma ọ bụ na mgbe mgbaàmà ahụ ruru ụlọ nyocha dị na Los Angeles, ọdịnihu nke robot a na-ama ihe.
Rover ji obere oge gbadata na mbara ikuku nke Mars na mbara ụwa. Ogologo oge ole ka ọ na-ewe maka mgbaàmà ahụ iru ala wee tụọ ihe dị ka nkeji 11. Oge a dị ihe dị ka nkeji 7 na Ndị injinia maara ya dị ka "nkeji 7 nke ụjọ". Ọ bụ ihe na - akpata ọdịiche dị n’etiti ihe ịga nke ọma ma ọ bụ ọdịda nke ọrụ ngagharị na mbara ala Mars.
Ọ bụghị naanị Rover chịkọtara ihe oyiyi dị egwu na ihe atụ okwute sitere na ala Martian. Na mgbakwunye, ọ ga-etinye ndekọ a na-enwetụbeghị: ụda edere n'elu Mars.
Ofda nke ụwa na-acha ọbara ọbara
Ntachi obi nke Mars jikọtara igwe okwu abụọ ga-ewepụta ihe ndekọ ederede pụrụ iche, gụnyere oge ọdịda na ọrụ nyocha robot ọrụ.
Otú ọ dị, n'ihi na njupụta nke mbara ala Martian dị naanị 1% karịa nke ikuku ụwa, na ngwakọta ahụ dị iche na mbara igwe anyị, ọ na-emetụta nsị na mgbasa nke ụda, ya mere ọ na-ada dị iche na ụda na uhie ụwa. Otu n’ime ihe ịrịba ama n’akụkọ ihe mere eme nke nyocha mbara igwe bụ ịmata ụda nke mbara ala a. Ọ bụ nnọọ ihe nchọpụta mgbe Mars nnọgidesi ike gosipụtara ụda nke ụwa a.
Usoro ọdịda niile na-akpaghị aka, ebe ọ bụ na nkwukọrịta na ụwa na-ewe ihe karịrị nkeji 11, robot ga-eche onwe ya n'oge ọrụ ahụ.
Gbọ mmiri nke robot nọ na ya nwere ọdụ nwere ụdọ na-ekpuchi ya na okpu mkpuchi. Ọnọdụ okpomọkụ dị na elu ọta nwere ike iru ihe ruru 1300 Celsius. Nke a na - eme ka ọ nwee ike ịnagide oke okpomọkụ nke elu ma ikuku nke mbara ụwa.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọganihu nke sayensị adịghị enye nnukwu ihe ọmụma banyere mbara ala nke mbara igwe. Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ntachi obi Mars na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Mars nnọgidesi ike